Daikon | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana no hananana akanjo goavana, fambolena sy fikarakarana daikon
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hilaza aminao momba ny daikon - ny fakan-javamaniry fototra, izay malaza any atsinanana ary manomboka tsikelikely manintona ireo mpamboly an-trano. Inona no daikon, inona ny fotsin'ny fambolena sy fikarakarana an'io zavamaniry io, ary inona no azo lazaina momba ny fotoan'ny famolavolana sy ny fanangonana azy, ho fantatra ao anatin'ny minitra vitsy.
Tendrombohitra voatokana ho an'ny ririnina, resipe
Radish dia vokatra iray isan-taona. Na dia izany aza, dia misy fitaovana ilaina mahasoa kokoa amin'ny vanin-taona amin'ny fahavaratra. Ny fanavotana ny tombontsoa azo avy amin'ny fotony dia azo alaina amin'ny ririnina. Ary ny fomba hiarovana ny karazana varimbazaha daikon, dia diniho bebe kokoa ao amin'ilay lahatsoratra. Ny tombontsoa amin'ny vatany Daikon - fambolena fototra iray, analogue of radish. Azonao atao ny manoratra boky momba ny tombontsoa azo avy amin'ireto legioma ireto: Daikon dia misy lisitr'ireo vitaminina B (avy amin'ny B1 ka hatramin'ny B12).
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Daikon